Nepal Record » स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षार्थ खटिने म्यादी प्रहरी कुन जिल्लामा कति ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षार्थ खटिने म्यादी प्रहरी कुन जिल्लामा कति ? – Nepal Record
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षार्थ खटिने म्यादी प्रहरी कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षार्थ मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी खटाउने भएको छ । सातवटै प्रदेश र उपत्यका गरी देशभर १ लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा मधेसका ८ जिल्लामा २१ हजार ६ सय ९८ जना भर्ना गर्न लागिएको हो ।
सबैभन्दा कम म्यादी प्रहरी खटिनेमा कर्णाली प्रदेश परको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ७ हजार ७ सय १३ जना म्यादीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । ७७ जिल्लामध्ये बढी म्यादी खटिने जिल्ला मोरङ परको छ । मोरङमा ३ हजार ७ सय २७ र सबैभन्दा कम मुस्ताङमा २ सय ३२ जना भर्ना लिन लागिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम विवरण निर्क्योल गरपछि म्यादी प्रहरीको तैनाथी संख्यामा केही तलमाथि पर्न सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको सहयोगीका रूपमा जवानसरह सुविधासहित ४० दिन कार्यावधि तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबारबाट देशभर एकसाथ म्यादी प्रहरीको भर्नाका लागि आवेदन खुलाएको छ ।
उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा बाँकी ७४ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एकसाथ म्यादीको भर्ना आवेदन लिइँदै छ । चैत ११ सम्म आवेदन दर्ता र चैत १५ बाट छनोट प्रक्रिया टुंग्याएर चैत २२ मा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रहरीको कार्यतालिका छ ।
छनोटमा परका आवेदकलाई चैत २८ बाट प्रशिक्षण दिएर प्रहरीको सहयोगीका रूपमा मतदान स्थल र केन्द्र तथा आवश्यकताअनुसार गस्तीमा खटाउने तयारी छ ।
उच्च सुरक्षा संवेदनशीलता र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा म्यादीको संख्या निर्धारण गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । तीन हजारभन्दा माथि म्यादी प्रहरी खटिने जिल्लामा मोरङ ९३७२७०, धनुषा ९३४८६०, सप्तरी ९३१३९० र सर्लाही ९३०८८० छन् ।
त्यस्तै २ हजारदेखि ३ हजारसम्म म्यादी खटिने ९ जिल्लामा काठमाडौं ९२७६७०, झापा ९२७६४०, महोत्तरी ९२७३६०, रौतहट ९२५८९०, बारा ९२५२८०, कपिलवस्तु ९२३८४०, रूपन्देही ९२३६००, सिरहा ९२३३१० र सुनसरी ९२१४३० छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार जिल्लाको सुरक्षा चुनौती, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान स्थल, मतदान केन्द्रलगायत स्थिति र अघिल्लो निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिलाई आधार बनाएर म्यादी प्रहरीको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १७ हजार ८ सय ३१ म्यादीको कोटा निर्धारण गरिएकामा सबैभन्दा बढी मोरङमा ३ हजार ७ सय २७ र सबैभन्दा कम ओखलढुंगामा ५ सय ७९ जना म्यादी भर्ना गरिनेछ ।
मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी म्यादी खटिने जिल्लामा परेको छ । मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा कुल संख्याको करिब २२ प्रतिशत म्यादी खटाइँदै छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी धनुषामा ३ हजार ४ सय ८६ र सबैभन्दा कम पर्सामा १ हजार ८ सय १ जना भर्ना गरिनेछ ।
मधेस प्रदेशमा पर्साबाहेक बाँकी प्रत्येक जिल्लामा दुई हजारभन्दा माथि म्यादी खटिनेछन् । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत ९उपत्यकाबाहेक० का १० जिल्लामा ११ हजार ३ सय ६३ म्यादी खटिनेछन् ।
यो प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा बढी चितवनमा १ हजार ७ सय ९ र सबैभन्दा कम रसुवामा २ सय ६३ म्यादी भर्ना हुनेछन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि ४ हजार ७ सय ३५ म्यादीको कोटा तय भएकामा काठमाडौंमा २ हजार ७ सय ६७, ललितपुरमा १ हजार २ सय ५ र भक्तपुरमा ७ सय ६३ जना म्यादी प्रहरी भर्ना हुनेछन् ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा १० हजार ६ सय २५ म्यादी प्रहरी तैनाथ गरिनेछ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गोरखामा १ हजार ८ सय ६८ र सबैभन्दा कम मुस्ताङमा २ सय ३२ म्यादीको भर्ना गरिनेछ । कास्की, पूर्वी नवलपरासी, स्याङ्जा र तनहुँमा पनि १ हजारभन्दा माथिको संख्यामा म्यादी प्रहरी खटाइँदै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका लागि १६ हजार ९८ म्यादीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा २ हजार ३ सय ८४ र सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुमका लागि ३ सय २ जना भर्ना गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ७ हजार ७ सय १३ म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १ हजार २ सय ६१ र सबैभन्दा कम हुम्लामा ४ सय १६ जना भर्ना गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा ९ हजार ९ सय ३७ म्यादी भर्ना गर्न लागिएकामा सबैभन्दा बढी कैलालीमा २ हजार ४ सय ५७ र सबैभन्दा कम डडेलधुरामा ६ सय ५२ जना भर्ना गर्न लागिएको छ ।
मापदण्डअनुसार म्यादी भर्नाका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आइतबारदेखि चैत ११ सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।
आवेदक कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, आँखाको दृष्टि माइनस वा प्लस २ भन्दा कमजोर नभएको, उचाइ पुरुषको ५ फिट २ इन्च र ५० केजी तौल, महिलाको हकमा ५ फिट उचाइ र तौल कम्तीमा ४२ केजी हुनुपर्ने सर्त राखिएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।